.... သုတဖလှယ် ၊ ....အမြင်ဖလှယ်၊
ကျနော်လှန်လှောကြည့်မိသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ ၅
ကျနော်ဟာ dictionary ခေါ် အဘိ၊ဓါန်စာအုပ်လေးတွေကို အတော်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ ဒီနှစ် ကျနော်တို့အခြေနေထိုင်တဲ့ နော်ဝေ နိုင်ငံဘာဂင်မြို့မှာ ကျနော့ရဲ့ ပညာရေးကို Bergen University Collegeမှာဆက်တက်ခွင့်ရခဲ့တော့ ကျောင်းသွားတက်ရင်းနဲ့ Oxford English Dictionary 2013 Correction နဲ့ ၂၀၁၄ မှာ ထုတ်တဲ့ နယူး လေးကို ၀ယ်ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေ့ပြီးတခြားသူတွေ ကိုလဲ ကိုသိတာလေးတွေကို ရှယ်ချင်လို့ ဒီ ပို့စ်လေးကို ဆက်ရေးမိပါတယ်။ သိပီးသားတွေလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်မိရင် ပိုသတိရသွားတာပေါ့ဗျာ။
value added tax (noun)atax on the amount by whichaproduct rises in value at each stage of its production and distribution
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုအဆင့်တခုချင်းစီမှာ ထုတ်ကုန်ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်တက်လာမှုပမာဏ အပေါ်မှာစည်းကြည်သောအခွန်။ (mer verdi avgift လို့နော်ဝေတွင်သုံးသည်။)အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ VAT လို့အတိုခေါ်ပြီး နော်ဝေလိုဆိုရင်တော့ MVA လို့ အတိုခေါ်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ နေတဓူဝ ဈေးဝယ်ရင်း ဈေးဝယ်ဘောင်ချာတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ အရက်တို့ စီးကရက်တို့ စတာတွေဟာ MVA , (VAT) များလေ့ရှိပါတယ်။ သိထားသင့်တယ်လို့ ယူဆမိတဲ့အတွက် ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
နောက်စကားစုတခုကတော့ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းတခုပါ။
know which side one's bread buttered on --- to know what is most advantageous for one. ( ဘယ်ဟာက ကိုယ့်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းဆုံဖြစ်စေမလဲ ဆိုတာသိပါတဲ့။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ carrier or professional လမ်းကြောင်းတခုခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ့် ဘယ် ကဏ္ဍမှာ အစွမ်းထက်သလဲ ပိုတော်သလဲ ဆိုတာ သိပြီး အဲဒီ ပိုတော်တဲ့ အရည်အသွေးကို များများသုံးတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်မိဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်က သင်္ချာတော်ရင် အင်ဂျင်နီယာလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ် အစသဖြင့်လိုဟာမျိုးပေါ့။ (သူများတွေကိုသာပြောနေတယ် ကျနော့အသက် ၄၀ ကိုအတော်ကျော်လာပြီးတာတောင် ကယ်၇ီးယာ တခုခု တိတိကျကျမရှိသေးဘူး။ ဒါကလဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေအရပေါ့ဗျာ။ တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကာလတခုက တော်လှန်ရေးက ပေးတဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရတာလေ။ အမြဲတန်းကွန်ပြူတာတို့ စားပွဲထိုင်အလုပ်တို့ချည်းလုပ်ရတာမှ မဟုတ်တာကို။ ၄၀ ကျော်မှ ပညာရေးလမ်းကြောင်းကို ပြန်စမိလို့ဒီလိုဖြစ်တာပါလို့ ပြန်ဖြေသ်ိမ့်တွေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တာအတွက် ဘယ်တော့မှ နောင်တမရသလို အမြဲတန်းဂုဏ်ယူနေဆဲပါ။)
ကဲအာလူးမဖုတ်တော့ဘဲ အထက်က အီဒီယံလေးရဲ့ ဥပမာလေးတွေ ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်။
He'll do it if his boss tells him to. He knows which side his bread is buttered on. (သူဟာ သူ့ရဲ့ အရာရှိသို့မဟုတ် အလုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဒါကို လုပ်ဖို့ သူ့ကို ပြောလာတဲ့အခါ သူဒါကို လုပ်လိမ့်မယ်။ သူဟာ ဘယ်ပေါင်မုန့်ရဲ့ ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာ ထောပတ်သုတ်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပထမ ၀ါကျမှာ ၀ိဘတ် ဖြစ်တဲ့ to ၀ါကျရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ထားလိုက်တာကို သတိပြုမိဖို့ရယ် ဒုတိယ ၀ါကျမှာ relative pronoun အသုံးအနှုန်းလေးဖြစ်တဲ့ which side his bread ဆိုတာကို သုံးထားပုံလေးတို့ကို တွေ့ရှိရတာ နောက်ဆုံး which side အပေါ်မှာ သက်ရောက်တဲ့ on ကို နောက်ဆုံးမှာ ထားသုံးထားတာလေးတွေကို သတိပြုမိရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမှု တိုးတက်လာနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 12:18 PM No comments:
အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး (စိန်ခေါ်မှု အပိုင်း၂)
အရပ်ဘက်စိုးမိုးမှုသည် ထိုလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးစုစုပေါင်း၏ရလာဒ် (collective result) ဖြစ်သည်။ တစုံတခုသောအကန့်အသတ်နှင့်ဖြစ်သောအချက်အလက်တခုခု မရှိပျက်ကွက်သွားခြင်းသော်၎င်း အားနည်းသွားခြင်သော်၎င်း (ဥပမာအားဖြင့် စစ်ဘက်အရာရှိတပ်ဖွဲ့များအတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့်ကင်းသောပညာရှင်ပီသမှုဝါဒထွန်းကားမှု ယဉ်ကျေးမှု သော်၎င်း၊ စွမ်းအားရှိသောလုံလောက်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော အရပ်ဘက်လူမှု လူ့အဖွဲ့ အစည်း(civil society) စသည်တခုခုအားနည်းသွားခြင်း) အရပ်ဘက်စိုးမိုးမှုအား ဒုက္ခရောက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များတွင် ဥပဒေ ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများက အရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုကို အားပေးဖြည့်စွမ်းသည့် ဥပဒေအချက်အလက်များကိုပို၍ရေးသားဖြည့်စွက်ခြင်းသက်သက်ဖြင့် ထိုလစ်ဟာချက်များကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဟူသည့် အချက်လည်းပါဝင်ကြောင်းအခိုင်အမာညွှန်ပြပေသည်။
ထိရောက်သောအရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုမှာ စစ်ဘက်ခေါင်း ဆောင်များက တချို့သောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်ရေးရာကဏ္ဍများတွင် အရပ်ဘက်ရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကို လက်ခံကောင်းလက်ခံလာနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ထင်ရှားသောဥပမာများမှာ တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်ကာကွယ်ရေးစီမံ ချက်များ။စစ်ဘက်တို့၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်၊ စစ်သားသစ်စုဆောင်းရေးနှင့်စစ်သင်တန်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖွဲ့ စည်းပုံ၊ လက်နက်အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်များ စသည်တို့ဖြစ်ပေသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် အရပ်ဘက် ကြီးကြပ်မှု (civilian oversight) သည် ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာရှိနိုင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးလိုလိုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပေသည်။ သို့သော် ထိုအရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင် ပီသမှုဝါဒအား လိုအပ်ချက်တခုအဖြစ် လက်ခံမှုလည်းပြုရပေမည်။စစ်ဘက်တို့အခန်းကဏ္ဍ များနှင့်ပတ်သက်၍ကန့်သတ်ချက်များဆိုင်ရာ ထင်ရှားသောမျဉ်းကြောင်းများ နှင့် စစ်ဘက် တို့၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ထိုအခန်းကဏ္ဍသည် သင့်တော်မျှတသည်ဟု စစ်သားများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြား ကျယ်ပြန့်သော သဘော တူညီချက်များ ရှိခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လို အပ်သောအရေးကြီးသည့်အချက်များဖြစ်ပေသည်။ များစွာသော အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆိုင် ရာနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာသိကျွမ်းထားသူများကယခုအချိန်အခါ၌ တောင်အာဖရိကတွင် ထိုသို့သော သဘောတူညီချက်သည် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာအစ်ရှူး ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်(World Bank)၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ International Monetary Fund(IMF) နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အင်္ဂလန်နှင့် ပြင်သစ်တို့ကဲ့သို့သော အလှူရှင်နိုင်ငံများက အာဖရိကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်၊ အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်ရုန်းကန်တော်လှန်လှုပ်ရှားမှု ကာလများမှတိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားအဟောင်းများအား လက်နက်များဖြုတ်သိမ်းရန် စသည် တို့အတွက်လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာများကို လူမှုစီးပွားရေးဘ၀ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း (socialeconomic restructuring) အစီအစဉ်တခုလုံးလုပ်ဆောင်မှု၏ လိုအပ်သော အစိတ် အပိုင်းအဖြစ် သဘောပေါက်နားလည်လာပုံရပေသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် စစ်တပ်ဖွဲ့များအား စစ်တပ်လျားများသို့ပြန်ရန်သာငွေကြေးကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးကို သိမ်းဆည်းထားကာ လိုအပ်သောနေရာများတွင်သာကောင်းစွာအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပေသည်။ ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် ၄င်းတို့၏စစ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏စစ်တပ်ဖွဲ့များအကြား နီးစပ်သောဆက်နွှယ်မှုကြိုးများကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်သော်၎င်း(အဖွဲ့အစည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအရ နှစ်သက်ဖွယ်ရာမရှိသည့်ပုံပေါ်သော်လည်း စိတ်ေ၇ာကိုယ်ပါ အကျိုးရှိသောတာဝန်ရွှေ့ပြောင်းမှု(salutary transfer) ကိုအောင်မြင် စေခြင်း)၊စစ်ဘက်အရာ ရှိများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာပညာပေးရေးအစီအစဉ်များ (comprehensive civic-educations program)များဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သော်၎င်း၊၊ လက်နက် ဖြုတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (demobilization programs) ကိုကူညီပေးခြင်း တို့ဖြင့် သော်၎င်း ကူညီပေသည်။
ထို့အပြင် မဟာဗျူဟာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွင် အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်နေ သောယ ခုလိုကာလမျိုးတွင် အာဖရိကသည် မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး နှင့် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု စသည်တို့တွင် ဗဟုသုတကွာဟချက်ရှိမှုကို ခံစားရလျက်ရှိပေ သည်။ လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းများ သုတေသနပြုသူများသည် ထိုကဲ့သို့သောအရေးအရာ ကိစ္စများအပေါ်တွင် လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေသောကွင်းပြင်နှင့်ချိန်ထိုးကြည့်သောလေ့လာမှုများ နည်းပါးလျက်ရှိနေပေသည်။ တောင်အာဖရိက (South Africa)၊ နိုက်ဂျီးရီးယား (Nigeria) နှင့် အီဂျစ် (Egypt) နိုင်ငံတို့မျှတွင်သာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစ်ရှူးနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရှင် ပီသစွာစနစ်တကျလေ့လာဆန်းစစ်ချဉ်းကပ်မှု တစုံတခုကိုပြုလုပ်ပုံရပေသေးသည်။ တောင်အာဖရိကသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများသည် နှိုင်းယှဉ်ချက်အားဖြင့်ပြောရလျှင် တစုံတ ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီဆိုနိုင်သော်လည်း အစိုးရကပေးသောသတင်းအချက်အလက်များ ကိုသာ လုံးဝမှီခိုလျက်ရှိနေပေသည်။ အရပ်ဘက်စိုးမိုးမှုနှင့် စစ်ဘက်တာဝန်ခံမှုတို့ကို မျှော် လင့်ချက်ထားရှိသော မည်သည့်နိုင်ငံတခုခုတွင်မဆို စစ်ဘက်ရေးရာအပါအ၀င်ဖြစ်သော မူဝါ ဒဆိုင်ရာအရေးအရာကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သော ရှင်သန်အားကောင်းသော ကျယ်ပြန့်ထိရောက်သော ဆွေးနွေးမှုများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေသည်။ စစ်ဘက်ရေးရာနှင့် ကာကွယ်ရေးအကြောင်းအချင်းအရာအစ်ရှူးတို့ကို လေ့လာသော အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများ (Nongovenmental organizations NGOs) ၊တက္ကသိုလ်များ သုတေသနဌာန များ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လျက်ရှိနေပေသည်။ နိုင်ငံရေးအရ မှန်ကန်အောင် ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အာဖရိကတိုက်ပေါ်တွင် ပိုလျှံစွာတည်ရှိနေပြီးဖြစ်ပေသည်။ လိုအပ်နေသောအရာမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအကြံပြုပြောဆိုသောအဖွဲ့များ (advocacy groups) များကမလုပ်ဆောင်နိုင်သော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပါဝင်ပတ်သက်နေသော ကျယ်ပြန့် သောအရေးအရာများကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မည့် ပညာရှင်ဆန်သောမဟာဗျူဟာ မြောက်လေ့လာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (professional strategic -studies organizations) ပင်ဖြစ်ပေသည်။
မိမိဘာသာပြန်တင်ပြနေသော အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများမှ ကူးယူအသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်ပါက မိမိ၏ ခွင့်ပြုချက်ယူ၍သော်၎င်း အနည်းဆုံး ကူးယူသူရေးသားဖေါ်ပြသော ဆောင်းပါး စာတမ်းစသည်တို့တွင် အောက်ခြေမှတ်စု footnote များဖြင့် မည်သည့်နေရာမှကူးယူဖေါ်ပြခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြပေးရန်။ ကျော်ထင် ဘာသာပြန်သူ ဖုံး ၀၀၄၇ ၉၉၂၅၁၉၈၈ နော်ဝေနိုင်ငံ။
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 12:59 PM No comments:
အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး (စိန်ခေါ်မှု အပိုင်း၁)
အာဖရိကကဲ့သို့သော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သော အထိန်းရအသိမ်းရခက်သောဒေသ တွင် ပေါ်ထွန်းလာနေသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၏ ဗဟိုကျသောပြဿနာမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် လုံလောက်သောတည်ငြိမ်မှုကို မည်သို့သေချာစေမည်နည်း ဟူသည်ပင်ဖြစ် သည်။တည်ငြိမ်မှုသည် တခြားများစွာများအကြား၌ ထိရောက်သောစစ်တပ်ဖွဲ့များအပါအ၀င် ဖြစ်သော သင့်တင့်လုံလောက်သော လူမှုရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးယန္တရားများ (social-control mechanism) များလိုအပ်ပေသည်။ အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာပြဿ နာများသည် ပေါ်ထွက်လာနေသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် ပို၍အရေးတကြီးအဆောတလျင် အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာဖြစ်လာနေပေသည်။ သို့သော်လည်းယင်းအရာများသည် ပို၍တည်ဆောက်ထားပြီးသောအစိုးရများတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့် ပြဿနာများတွင် ပုံစံအားဖြင့် တူညီပေသည်။ ယင်းပြဿနာမှာ နိုင်ငံအတွက်အမှုထမ်းဆောင်နေသော စစ်တပ်ဖွဲ့များသည် သူတို့အတွက်ရည်စူးသတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်း၍ နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေးကို မခြိမ်းခြောက်ရန်ဖြစ်ပေသည်။
စစ်တပ်သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းဗဟိုဌာနများနှင့် ၄င်း၏ နီးကပ်စွာတည်ရှိနေ မှုကြောင့် ၄င်း၏ လုပ်သက်ရင့်အမိန့်ပေးအရာရှိများ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍဌာနများ တွင်ဦး ဆောင်နေသော အဆင့်ဆင့်သောအရာရှိများကို ဖြတ်သန်းလျက် မူဝါများအပေါ်တွင် သြဇာ လွှမ်းမိုးရန် စွမ်းအားအရှိဆုံးသောနေရာတွင် ရှိနေပေသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဆံနိုင်ငံများ၌ စစ်တပ်တွင် ဗျူရိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးများကြား၌ စွမ်းအားအရှိ ဆုံးဖြစ်စေမည့် အရင်းအမြစ်များရှိနေပေသည်။ စစ်တပ်ဖွဲ့များ၏ ဖွဲ့စည်းထူထောင်မှုများက အောက်ပါအချင်းအရာများကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတတ်ကြပေသည်။
၁။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုကဏ္ဍ များတွင် (organizational and logistical autonomy) လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ကျန်သည့် အစိတ်အပိုင်းထက် အဆင့်မြင့်မြင့်ရယူထားခြင်း။
၂။ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သည့်အစုအဖွဲ့များရှိနေခြင်။ နှင့်
၃။ နိုင်ငံ၏ အင်အားသုံး၍ အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်စေနိုင်သောယန္တရားကဏ္ဍများအား အသုံးပြုမှုကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် အနီးအနား၌ ရှိနေမှု။
စစ်တပ်ဖွဲ့များသည် အင်အားကို အသုံးပြု၍ ( force majeure) အာဏာကို သိမ်းပိုက် ရန်ရည်ရွယ်သော တသီးပုဂ္ဂလများ အုပ်စုများ၏ လွှမ်းမိုးလိုမှုများအပေါ် လိုက်နာလုပ်ဆောင် လိုသော အညှာလွယ်မှုများ ရှိလာခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍လည်း ၇ှိနေလိမ့်ဦးမည်ဖြစ် ပေသည်။ အညီအမျှအားဖြင့် တသီးပုဂ္ဂလစစ်ဘက်အမိန့်ပေးအရာရှိများကလည်း သူတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး သူတို့၏တပ်ဖွဲ့များကို အစိုးရအား အာခံ ဆန့်ကျင်သော တပ်ဖွဲ့များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သော အန္တရာယ်တခုသည်လည်း စစ်တပ်သည် သာလျှင် တခုတည်းသော ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်သောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် တည်ရှိ နေသောနေရာများတွင် သိသိသာသာကြီးကြီးမားမားရှိနေသောအရာဖြစ်ပေသည်။
ထိုမြင်နေရသောခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနေသည့်အခြေအနေတွင် အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်မှု ကို အကောင်းဆုံးထူထောင်မည်နည်း။ ထိရောက်မှုဖြစ်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
တခုမှတ်မိရန်အရေးကြီးသည်မှာ သေချာ၍အဖွဲ့အစည်းပုံစံတကျလည်ပတ်လုပ်ဆောင် နိုင်သော အရပ်ဘက်စိုးမိုးမှု(securely institutionalized civilian control) တည်ရှိသောနေရာသည် အရှည်သဖြင့်တည်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သောတမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာအစဉ် အလာများ၊ အြစိုးရ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း နှင့် စစ်ဘက်ကိုယ်တိုင်တို့အား သက်ရောက်သော ပုံစံတကျနှင့် ပုံစံတကျမဟုတ်သော လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာများ (formal and informal measures) ပါဝင်သော ရောနှောတည်ရှိနေသည့် တစုံလုံး အခြေ အနေများ တို့မှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ရလာဒ်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအခြေအနေတစုံလုံးက စစ်ဘက်တို့လည်ပတ်လုပ်ဆောင်သော ဘောင်ကို သတ်မှတ်ပေးပေသည်။ လောလောဆယ် ရည်မှန်းချက်များအတွက် ထိုလုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအတာများကို အုပ်စု ၃ ခုခွဲခြားနိုင်ပေသည်။
၁။ နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် ဥပဒေပြဌာန်းမှုများ (ဖြစ်လေ့ရှိတတ်သည်မှာ တ၀က်တပျက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ-aquasi-constitutional national-security or defense act) မှ ဆင်းသက်လာသော သို့မဟုတ် ပါဝင်သော လုပ်ဆေင်မှုအတိုင်းအတာများ သည် ပထမအမျိုးအစားဖြစ်ခြင်း။
၂။ ဒုတိယအမျိုးအစားအုပ်စုမှာ နိုင်ငံ၏ ပုံစံတကျဖြစ်သော အာဏာစက်ကွင်းဘောင်အပြင် သို့ကျရောက်နေတတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (civil society) နှင့်ပတ်သက်စပ်ဆိုင်ပေသည်။ ၄င်းတို့အနက် သိသာထင်ရှားသောအရာများမှာ သတင်းမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍ၊ လွတ်လပ်သောပညာရှင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာများနှင့် ထိုကဲ့သို့သောအ၇ာများဖြစ်ပေသည်။
၃။ နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်ပြီးအလွန်လည်းအရေးကြီးသည့်အရာမှာ ထိုအပေါ်ကတင်ပြခဲ့သောအရာများသည် စစ်ဘက်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့်လည်းဆက်စပ်နေပြီး ။ စစ်ဘက်၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ စစ်တပ်အတွင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျာ၏ စနစ်တို့၏ သဘာဝ နှင့် စစ်ဘက်တို့၏ တာဝန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို လမ်းညွှန်နေသော အဓိကလမ်းညွှန်မူဝါဒ များ စသည်တို့ဖြစ်ပေသည်။
(ယခင်က ကျနော်ဘာသာပြန်သည့်အရပ်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး အခန်းဆက်ဆောင်းပါးများကို စည်းလုံးခြင်းသည်အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် အခန်းဆက် အပတ်ပေါင်းများစွာတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ကျနော့ဘလော့တွင် ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။)
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 2:20 PM No comments:
ကျနော်လှန်လှောကြည့်မိသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၄)
ကျနော်ဘလော့ မရေးဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။ ဒီနေ့တော့ အရပ်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး ကိုလည်း ဆက်၍ဘာသာပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်တော့ ဘလော့ ဆီပြန်ကြည့်ဖြစ်မိ၍ ရေးသား လိုစိတ်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက် ကျနော်လှန်လှောကြည့်သော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၄) ကို ရေးရန် စိတ်ရှိလာပါသည်။ ဒီနေ့ကျနော်ရေးသားတင်ပြလိုသည့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတခုမှာ window -dressing ဆိုသော ဝေါဟာရ တလုံးဖြစ်ပေသည်။ ထိုဝေါဟာရကို Collins English Dictionary တွင် အောက်ပါအတိုင်းဘာသာပြန်ထားပေသည်။ 1. the art of arranging goods in shop windows in suchaway to attract customers. ဖေါက်သည်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ဈေးဆိုင်ပြူတင်းပေါက်များတွင် ကုန်ပစ္စည်းများအစီအစဉ်ခင်းကျင်းသည့် အနုပညာ သို့မဟုတ် အတတ်ပညာ။ 2. an attempt to make something seem better than it is by stressing only its attractive features. ထိုအင်္ဂလိပ်စာဘာသာပြန်ချက်ကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ယူလျှင် အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ပတ်သက်၍ များစွာတိုးတက်နိုင်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ တစုံတရာအား ၄င်းတွင်ရှိသည်ထက် ပို၍ကောင်းသည့်ပုံပေါက်အောင် ၄င်း၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အပိုင်းများကိုသာ အဓိကဦးစားပေး ဖေါ်ပြခြင်းအားဖြင့် ကြိုးစားခြင်း။ ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။ ကျနော်ပဲအင်္ဂလိပ်စာအဖတ်နည်းသွားလို့လား မသိပါ။ ထိုစာကြောင်းကို ၂ ခေါက် ၃ ခေါက် ပြန်ဖတ်ယူမှ နားလည်သွားပေသည်။ ထိုအဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်တွင် make နောက်တွင် object ခံ၍ verb 1 လိုက်နိုင်သည်ကို ၄င်း။ seem တို့ appear , stay, get စသည်တို့နောက်တွင် adjective တခါတည်းလိုက်လာနိုင်သည်ကို၎င်း တပါတည်း လေ့လာသွားနိုင်ပေသည်။ ထို အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက် ၀ါကျရေးသားပုံလေးအား တအားသဘောကျနေမိသည်။
ထိုဒုတိယအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် တကယ်ရှိသည်ထက် ဟု ဆိုသဖြင့် မရိုးသားသည့်သဘော ကိုလည်း စာဖတ်သူများရိပ်မိနိုင်ပါသည်။ ပါးနပ်စွာအလိပ်မခံရဖို့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တွင် ဈေးဝယ်သူများ သတိချပ်ကြဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုဒုတိယအဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်တွင် တွဲ၍ပါလာသော နမူနာဝါကျလေးကို လေ့လာကြည့်စေချင်ပါသည်။
Do you think that the president's calling for an investigation is window-dressing og do you think he actually means to do something? သမတ၇ဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ် မင်းအနေနဲ့ အပြကောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်လို့ထင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ့အနေနဲ့ တခုခုကို ပြုလုပ်စေချင်လိုတဲ့ ဆန္ဒတကယ်ရှိတယ်လို့မင်းထင်သလား။ အဲဒီစာကြောင်းမှာလည်း that clause ပါတဲ့ မေးခွန်းကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Do you think ကိုသာ မေးခွန်း word order ဖြင့်ရေးရန်ဖြစ်ပြီး that clause နောက်မှာပါလည်သည့် ၀ါကျကို affirmative sentence အပြုဝါကျသာရေး၇န်ဖြစ်သည်။ that clause ပါသည့် ၀ါကျတခုကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ How long do you think (that) we should wait? ငါတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာစောင့်သင့်တယ်လို့မင်းထင်သလဲ။ တကယ်က How long ဟာ we should wait နဲ့သာတွဲ၍ဒီမေးခွန်းကို မေးသင့်တယ်လို့ကျနော်တို့ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ How long ဟာ do you think နဲ့တွဲမေးတာကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ျWhat did you say (that) you wanted for Christmas?ခရစ်စမတ်အတွက် ဘာတွေလိုတယ်လို့မင်းပြောခဲ့သလဲ။ အဲဒီမေးခွန်းတွေမှာ အရှေ့ဆုံးမှာ ပါတဲ့ အမေးစကားလုံးဟာ that clause မှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်စပ်မေးခွန်းဖြစ်တာ ကျနော်တို့ သတိပြုကြရပါ့မယ်။ အဲဒီ that clause ပါတဲ့ မေးခွန်းမှာ တခါတလေမှာ that ကို ချန်ထားပစ်ခဲ့သလို တခါတရံထည့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ that ဟာ that နောက်မှာပါလာတဲ့ လက်အောက်ခံဝါကျရဲ့ subject ပေါက်သွားစေနိုင်ရင်တော့ that ကို ချန်ကိုချန်ပစ်ခဲ့ရပါ့မယ်။ Who do you think is outside? အပြင်မှာဘယ်သူလို့ မင်းထင်သလဲ။ What do you suppose will happen now? အခုအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ မင်းထင်သလဲ။
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 7:42 PM No comments:
ဒီတပါတ်မှာတော့ ကားသီအိုရီစကားလုံးများ ကိုပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့းသလို တော်တော်လည်း ပြန်အားယူပီးရေးခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူး အိမ်မှာ အတူတူစားကြသောက်ကြစကားစမြည်ကျကြရင်း လာလည်သူ ရခိုင်အမျိုးသား ကိုထွန်းရွှေက ကားသီအိုရီကို မြန်မာပြန်လေ လို့ တောင်းဆိုအားပေးရင်းပြောလာသည့်အတွက် ရေးလိုစိတ်တွေပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ အများအကျိုးအတွက် တပြားတချပ်မှမရသောအလုပ်ကို စေတနာရှေ့ထား၍လုပ်တတ်သော စိတ်က တနေ့တချိန်မှာတော့ မိမိအတွက်လည်း တစုံတရာအကျိုးဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ မဖြစ်လည်း အများတွက်အကျိုးရှိသွားသည်ကလည်း ရည်ရွယ်ချက်ပေါက်မြောက်သွားသည်မဟုတ်လား။ ရ့ည်ရွယ်ချက်တခု ပေါက်မြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်တတ်သော အကျင့်တခုမိမိတွင် ရလာသည်မဟုတ်ပါလား အခုကိုပင် ဒီစာရေးနိုင်အောင် ကောင်းမွန်သည့်အလုပ်တခုဖြစ်သည့် စာဖတ်ခြင်းစာရေးခြင်း အလုပ်တခုကို မိမိလုပ်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။ ပြောနေတာကြာ ပါသည်။ နိဒါန်းတွေရှည်နေမည် လိုရင်းကိုသွားကြရအောင်။ ဒီတပါတ်မှာ ကျနော်ရေးသားတင်ပြမည့် စာလုံး ၂၇၀ ကျော်အနက်မှ တတိယစာလုံးကတော့ alkohol (alcohol) အရက် ဆိုသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။
0,2 promille -grennse
Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, og reduserer allerede ved 0,2 promille vår evne til å løse oppgaver. Effekten av alkohlol øker med stigende konstrasjon i blodet.Følgende virkninger av alkohol er typisk:
Redusert konsentrasjonsevne og kortidshukommesle
Sløvet kritiske sans
Økt impulsivitet og aggressivitet
Bakrus er ettervirkninger av større alkoholinntak. Presentasjonsevnen nedsatt og kjøreferdighetene redusert, selv om alkoholen er ut av kroppen. Konsentrasjonen av alkohol i blodet minker med 0,1- 0,15 promille for hver time.
Alcohol is the most common intoxicant in our (Norwegian) culture and even withablood alcohol content as low as 0,2 % our ability to solve problems is impaired. the effect of alcohol increases as its consentrasjon in the blood rises. The following are typical effects of alcohol.
loss of learnings
blunted critical sense
increased impulsiveness and aggressionA hangover is the result ofamajor intake of of alcohol the previous day. Performance is greatly reduced and drivingt skill impaired, although the alcohol is out of your body. The concentration of alcohol in the blood decreases by 0.1 to 0.15% per hour.
၁ ပရိုမီးလဲ (promille) ဆိုတာက အရက် ၁ ယူနစ်ရဲ့ တစ်ထောင်ပုံတပုံ ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရက်လစ်မစ်ဟာ ၀.၂ ပရိုမီလဲပဲဆိုတော့ အရက် ၁ယူနစ်၇ဲ့ ၅၀၀၀ ပုံတပုံဟာ လစ်မစ်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ အရက်ဟာ ကျနော်တို့(နော်ဝေ)ယဉ်ကျေးမှုမှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မူးယစ်စေတတ်တဲ့ယမကာတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၀.၂ ပရိုမီလဲ လောက်အရက် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာတောင် အဲဒီအရက်လေးတောင်မှ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကို အားနည်းစေပါတယ်။ (ဘာသာပြန်သူမှတ်ချက်-ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နော်ဝေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ lett øl လို့ခေါ်တဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ ဘီယာမှာတောင် အရက်ရာခိုင်နှုန်း ၄% ထိပါတော့ ဒီပေါ့ပါးတဲ့ဘီယာကိုသောက်ပီးအချိန်မှာတောင် ကားမောင်ဖို့အဆင်သင့်ပြန်ဖြစ်အောင် အတော်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ) သွေးထဲမှာ အရက်ပါဝင်မှုသိပ်သည်းဆမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ အရက်၇ဲ့ထိရောက်မှုပမာဏဟာလည်း မြင့်တက်လာပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြထားတာတွေကတော့ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အရက်၇ဲ့သက်ရောက်မှုတွေပါပဲ။
ခံစားမှုပြောင်းလဲခြင်း။ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ရေတိုမှတ်ညဏ်ဆုံးရှူံးခြင်း။ လေ့လာသင်ကြားခြင်းစွမ်းရည်များဆုံးရှူံးခြင်း။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်
သောစွမ်းရည်များ တုံးသွားစေခြင်း။ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ခြင်းနှင့် ရန်လိုတတ်ခြင်းများကို တိုးပွားစေခြင်း။ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
နောက်တရက်တွင် အရက်နာကျနေတတ်ခြင်းသည် အရက်သောက်ထားခြင်း၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေသည်။ အရက်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှထွက်သွားသော်လည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းများ ကြီးမားစွာ လျော့နည်းစေတတ်ပီး ယာဉ်မောင်းခြင်းစွမ်းရည်အား အားနည်းစေပါသည်။ သွေးထဲမှအရက်များတဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားခြင်းသည် တနာရီလျှင် ၀.၁ ပရိုမီလဲမှ ၀.၁၅ ပရိုမီလဲ အထိသာရှိပေသည်။ ထားမည့်စာကိုဒီနေရာမှာရေးပါ ခေါက်ထားမည့်စာကိုဒီနေရာမှာရေးပါ
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 12:20 PM No comments:
ကျနော်လှန်လှောကြည့်မိသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ (၃)
ကျနော်လှန်လှောကြည့်မိသော အင်္ဂလန်စကားလုံးများ(၃)တွင်တော့ ကျနော်တို့သိထားသည့် water ဆိုသည့် ဝေါဟာရကို ကျနော်တို့သိထားသည်မှာ ရေတွက်မရနာမ် (uncountable) ရေအဖြစ်နှင့်သာ ကျနော်တို့နားလည်ထားကြပေသည်။ water ကို waters အများကိန်းနာမ်အဖြစ်အသုံးရှိသည်ကို ကျနော်ဒီတပတ်တွင်တင်ပြလိုပါသည်။
(1) waters (pl) the water inaparticular lake river, sea or ocean( တစုံတခုသော မြစ်၊ ပင်လယ် သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာတို့တွင် တွေ့ရသော ရေ။ : the grey water of the River Clyde. ကလိုက်မြစ်အတွင်းမှ အညိုရောင်အရေ ။ This species is found in coastal waters around the Indian Ocean. ထိုမျိုးစုများကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအနီးတ၀ိုက်ရှိ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှရေများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
(2) waters (pl) an area of sea or ocean belonging toaparticular country နိုင်ငံတနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သော ပင်လယ်သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာဧရိယာတခု။ We were still in British waters. ကျနော်တို့အားလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်ရေပိုင်နက်မှာရှိနေဆဲပဲဖြစ်တယ်။ Fishing in international waters နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်တွင် ငါးဖမ်းခြင်း။ territorial waters - noun (pl) the parts ofasea or an ocean which are nearacountry's coast and are legally under its control ပင်လယ်ရေပိုင်နက် - နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအနီးတွင်တည်ရှိသော၊ ၄င်းနိုင်ငံ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ပင်လယ်တခု သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာတခု အစိတ်အပိုင်းများ။
waters ဆိုသော စကားလုံးအား တင်ပြပြီးနောက် နောက်ထပ်တင်ပြလိုသော စကားလုံးတခုမှာ indiscriminate ဆိုသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ discriminate ကိုလူအများသိထားသည်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဥပမာလိင်အရ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ယောက်ျားကို ဦးစားပေး၍မိန်းမကို နှိမ်၍ဆက်ဆံခြင်း။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း။ အစသဖြင့် နားလည်ထားကြသဖြင့် ၄င်းအဓိပ္ပါယ်နှင့် ဆက်စပ်ကာ ပြောင်းပြန်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သွားမည်လား စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့စဉ်းစားပါက discriminate သည် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအဓိပ္ပါယ်ကိုပေးသဖြင့် indiscriminate သည် လိင်၊ဘာသာရေးအရ၊လူမျိုးရေးအရ မခွဲခြားမဆက်ဆံခြင်း ဆိုသည့် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အဓိပ္ပါယ်ကိုပေးမည်လားဟု အတွေးပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ indiscriminate ဆိုသော စကားလုံးသည် ခွဲခြားမှုမပြုသည့် အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ပေးပါသည်။ သို့သော် ယင်းသည် မခွဲခြားသင့်သည်ကို မခွဲခြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ခွဲခွဲခြားခြား စဉ်းစားသင့်သည်ကို ခွဲခွဲခြားခြားမစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သဖြင့် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အဓိပ္ပါယ်ထပ်ထွက်ထားပြန်သည်။ အဓိပ္ပါယ်အတိအကျမှာ doing action without thought about what the result may be especially when it causes people to be harmed - တခုခု၏အကျိုးရလာဒ်ကို သေသေချာချာခွဲခွဲခြားခြား မစဉ်းစားဘဲ အထူးသဖြင့် လူအများထိခိုက်နာကျင်မည်ကို မစဉ်းစားဘဲ အပြုအမူများကို ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဤနေရာတွင်မူ ခွဲခွဲခြားခြားစဉ်းစားသင့်သည်ကို မခွဲခြားတော့သည်ကို ကျနော်တို့သတိပြုမိမည်ဖြစ်ပါသည်။ indiscriminate attacks on motorists by youths throwing stones လူငယ်များ၏ယာဉ်မောင်းသမားများအပေါ်၌ကျောက်ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်သည့် မဆင်မခြင်တိုက်ခိုက်မှု။ Doctors have been criticized for their indiscriminate use of antibiotics. ဆရာဝန်များသည် သူတို့၏ပဋိဇိဝဆေးများမဆင်မခြင်သုံးစွဲမှုအတွက် အဝေဖန်ခံနေရသည်။
ယခုနောက်ဆုံးတလုံးမှာ indeterminate ဆိုသည့်စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ determinate သည် ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖြတ်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ သံန္နိဌာန်ရှိရှိဆုံးဖြတ်ထားသည်။ စသည့် အဓိပ္ပါယ်ကိုရသဖြင့် indeterminate သည် determinate ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပါယ်အဖြစ် ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖြတ်မရှိသော ဝေေ၀၀ါးဝါးနိုင်သောဟူသော အဓိပ္ပါယ်ထွက်နိုင်သည်ဟု အဘိဓာန်လှန်မကြည့်ဘဲ ခန့်မှန်းပြောဆိုနိုင်ပေသည်။ ဤတခါတွင်တော့ အမှန်တကယ်လည်းယင်းသို့သော အဓိပ္ပါယ်နှင့်နီးစပ်စွာထွက်သည်ကိုတွေ့ရပေသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကိုကြည့်ကြ၇အောင် that cannot be identified easily or exactly - တိတိကျကျလွယ်ကူစွာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို၍မရနိုင်သော ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။ Her eyes were an indeterminate color. သူမ၏မျက်လုံးသည် မည်သည့်အရောင်ဖြစ်သည်ဟုပြောရခက်သော အရောင်ဖြစ်ပေသည်။ She wasatall woman of indeterminate age. သူမသည် အသက်အရွယ်မည်မျှဖြစ်သည်ဟု တိတိကျကျခွဲခြားမဖေါ်ပြနိုင်သော အရပ်ရှည်သည့် အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပေသည်။
ထိုကြောင့် အင်္ဂလိပ်နာမ၀ိသေသန တလုံးအေ၇ှ့တွင် in (surfix) အဖြစ်ပေါင်းထည့်လာပါက နဂိုမူလ နာမ၀ိသေသနအဓိပ္ပါယ် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအဓိပ္ပါယ်ထွက်သလို အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအဓိပ္ပါယ်လိုက်ထွက်သည်ရှိသလို မူလအဓိပ္ပါယ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်နီးနီးအဓိပ္ပါယ်ထွက်သည်လည်းရှိသဖြင့် adjective တလုံး၏အရှေ့တွင် in ပေါင်းထည့်လာပါက မူလအဓိပ္ပါယ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ထွက်မည်ဟု အကြမ်းမျဉ်းအဓိပ္ပါယ်ကောက်မယူဘဲ အဘိဓာန်သေသေချာချာလှန်လှောကြည့်ရှုကာ ကိုယ့်နားလည်မှုနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ယူသင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိကြောင်းထင်ပြလိုပါသည်။
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 11:06 PM No comments:
ဒီတပတ်မှာတော့ နော်ဝေမှာနေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်ဘွားများ ကားလိုင်စင်ဖြေတဲ့နေရာမှာ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီလို့ရအောင်လို့(၂၀၀၉ခုနှစ်ထုတ်) ကားသီအိုရီစာအုပ်မှာထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ အဓီက စာလုံး၂၇၀ ခန့်ကို ကျနော် တဖြည်းဖြည်း ချင်းရေးသားတင်ပြသွားပါ့မယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ A စာလုံးကနေပဲစပါ့မယ်။ ပထမဦးဆုံး စာလုံးကတော့ အဲဒီ ၂၀၀၉ခုနှစ်ထုတ်စာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၅ က ABS-bremser ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ အဲဒီစာအုပ်မှာ ရေးသားထားတာက
Moderne biler har antiblokkeringssystem (ABS) som bidrar til optimal bremsing uansett føreforhold. Sensorer på alle hjulene informerer en datamaskin om hvor rast hjulene ruller eller om de er i ferd med å låse seg.
(English) လိုနဲ့ရေးသားတဲ့ စာအုပ်တွေမှာတော့ Modern cars have an anti-lock braking system (ABS) which makes for optimal braking regardless of road conditions. Sensors on all four wheels informacomputer how quickly the wheels are turning and whether they are in the process of locking.
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ - ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာ လမ်းအခြေအနေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ အကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံးဘရိတ်ဆွဲခြင်းကို ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေတဲ့ ဘရိတ်ပိတ်ဆို့နေခြင်း (တနည်းအားဖြင့် ဘရိတ်လုံးဝကပ်သွားခြင်း)ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စနစ်တခုရှိတယ်။ အဲဒီစနစ်မှာ ဘီးအားလုံးမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အလင်း အပူဖိအားတို့ကို အာရုံခံတုန့်ပြန်တတ်တဲ့ ကိရိယာ (sensors)များဟာ ကားဘီးဘယ်လောက်မြန် မြန်လည်ပတ်နေတာကိုလည်းကောင်း ဘရိတ်ကကားဘီးအားဘယ်လောက်သွားကပ်ပီး ဘရိတ်ဆွဲနေခြင်းဖြစ် စဉ်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ကိုလည်းကောင်းကွန်ပြူတာကို သတင်းပို့လျက်ရှိပါသည်။
Aktpågivende စာမျက်နှာ ၉၃ မှာပါပါတယ်။ အဲဒီမှာရေးသားဖေါ်ပြထားတာကတော့ Aktpågivende i grunnregelen er det samme som å være oppmerksom. Under kjøring må føreren skaffe seg informasjon om trafikken foran, på siden og bak bilen. Han eller hun må skille ut det som er viktig i en stadig strøm av inntrykk.
(English) လိုနဲ့ရေးသားတဲ့ စာအုပ်တွေမှာတော့ Alert လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတာကတော့ In the basic rule, alert means paying attention. A driver must obtain informasjon from the traffic in front, behind and on both sides of the car. He or she must pick out what is important inasteady stream of impressions.
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွင် Aktpågivende (Alert) ဆိုတာဟာ သတိရှိနေခြင်း သတိပြုမိနေခြင်း လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဘာကိုသတိပြုနေရမလဲဆိုတော့ ကားမောင်းသမားတဦးဟာ ကိုယ့်ကားရဲ့အရှေ့မှာ၊ ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ပီးတော့ ကိုယ့်ကားနောက်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သတိပြုနေရမယ် အာရုံကပ်ထားနိုင်ရမယ်ဆိုလိုတာပါပဲ။ ကားမောင်းသမား (သူ သို့မဟုတ် သူမ)ဟာ ကားမောင်းနေစဉ် တချိန်လုံးတွေ့ကြုံသိမြင်နေရတဲ့အထဲမှ ဘာဟာအရေးကြီးသလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်ကောက်ယူရမယ် ဆိုတာပါပဲ။
ကျနော်တဖြည်းဖြည်းချင်းတပတ်ပီးတပတ်ရေးသားတင်ပြသွားပါ့မယ်။ ဒီတပတ်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲနားပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ ကျော်ထင် အချိန် 11:36 AM No comments:
English Idiom and Proverb (1)
လူထုတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲကြစို့ (1)
အရင်ကပိုစ်လေးတွေကဒီမှာ Feb 2015 (1) Jul 2014 (2) Jun 2014 (1) Jan 2014 (1) Dec 2013 (1) Oct 2013 (2) Sep 2013 (1) Aug 2013 (2) Jul 2013 (1) Mar 2013 (2) Feb 2013 (2) Dec 2012 (1) Jul 2012 (1) May 2012 (2) Mar 2012 (1) Nov 2011 (1) Sep 2011 (5) Aug 2011 (1) Jul 2011 (1) Jun 2011 (1) May 2011 (1) Mar 2011 (2) Feb 2011 (1) Jan 2011 (1) Nov 2010 (4) Oct 2010 (3) Sep 2010 (2) Aug 2010 (4) Jul 2010 (7) Jun 2010 (8) May 2010 (8) Apr 2010 (5) Mar 2010 (13)
Interview with Dr Tint Swe On China-Myanmar relation-2
ပြည်တွင်း၌ ပိတ်ထား၍ ကြည့်ခွင့် မရှိသည့် ဇာတ်ကားများ